Puntland oo faah faahisay kiiska loo haysto Siyaasi Muuse Cali Jaamac | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Puntland oo faah faahisay kiiska loo haysto Siyaasi Muuse Cali Jaamac
Xeer ilaalinta Guud ee gobolka Bari Puntland ayaa faah faahin guud waxaa ay ka bixisay kiiska dacwadda ah ee loo heysto Siyaasi Muuse Cali Jaamac oo dhawaan ay xireen Ciidamada Puntland.
Xeer ilaaliyaha Guud ee gobolka Bari ayaa sheegay in Siyaasiga uu sicad ugu gefay Garsoorka Puntland,isla amrkaana uu sheegay inay yihiin kuwa qaata laaluushka.
Waxaa uu sheegay in isaga laftirkiisa uu maxkamada ka hor qirtay kiiska lagu eedeeyey,isla markaana Sharciga waxaa uu ka qabo la marsiin doono.
“Garsoorka Puntland ayuu u gefay sababta ku kaliftay ma naqaano,balse dad ayaa lahaa siyaasad ayuu u xiran yahay laakin uma xirna,waxaana Diinta Islaamka iyo xeerarka dalka u yaalla ma baneneyneyso in qof la caayo ayuu yiri “Xeer ilaaliyaha gobolka Bari.
Sidoo kale Xeer ilaaliyaha Maxkamada Darajada 1aad ee gobolka Bari ayaa waxaa hadalkiisa uu intaasi ku daray in cid alaala cidii u geftay Garsoorka dalka inay cadaaladda hor keeni doonaan,isla markaana aysan ka aqbaleyn in loo gefo.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac ayaa maalma ka hor waxaa uu ka qeyb-galay kulan ka dhacay Magaalada Boosaaso,isaga oo Warbaahinta u Akhriyey bayaan ay soo saareen Odayaasha & Waxgaradka gobolka Bari oo shirkaasi yeeshay.
Previous articleXog: kismaayo oo qarka u saaran Dagaal qarxa
Next articleFaa Faahin: Banaanbax ka dhacay Jowhar